अल्काटेलले यसको फोल्डेबल स्मार्टफोन प्रोटोटाइप MWC मा देखाउँदछ Androidsis
TCL MWC19 मा अल्काटेलको फोल्डेबल स्मार्टफोन प्रोटोटाइप प्रस्तुत गर्दछ
ईडर फेरेनो | | मोबाईलहरू, MWC
टीसीएल MWC २०१० मा उपस्थित कम्पनीहरूमध्ये एक हो जससँग अन्यसँग पनि छ अल्काटेल स्मार्टफोनको नयाँ दायरा। तर कम्पनीले बार्सिलोनाको कार्यक्रममा हामीलाई अरू धेरै समाचारहरू छोड्छ। किनकि यो पनि ज्ञात भइरहेको छ कि उनीहरू फोल्डिphones स्मार्टफोनहरूमा काम गर्छन्, जुन २०२० मा सुरू हुने छ। उहीको पहिलो प्रोटोटाइप हामी बार्सिलोनामा पहिले नै थाहा पाइसकेका छौं, DragonHinge नामको साथ।
ड्र्यागनहिंग टेक्नोलोजी हो जुन TCL ले यसको फोल्डिंग स्मार्टफोनहरूको लागि विकसित गरेको छ। एक काज जुन बहुविध गियरहरू देखाउँदछ र विभिन्न फोल्डि phones फोनहरूको विकासलाई अनुमति दिनेछ, जुन २०२० मा अल्काटेलका लागि अन्यमा आइपुग्नेछ। हामी यस प्रविधिबाट के आशा गर्न सक्छौं?
हामीसँग पहिले नै छ टीसीएलले अल्काटेलका लागि तयार गरेका यी नयाँ प्रोटोटाइपहरू पहिलो-हेडमा हेर्न सक्षम छन्। त्यसोभए यो बुझ्न अझ सम्भव छ कि यी नयाँ स्मार्टफोनहरू जुन हामी बजारमा एक बर्षमा हेर्नेछौं कसरी अझ राम्रो काम गर्दछ। यस टेक्नोलोजीको उत्पत्तिको बारेमा थप जान्नुको साथै। एक टेक्नोलोजी जुन कम्पनीले पहिले नै पेटन्ट गरिसकेको छ, र यसलाई एन्ड्रोइडमा अन्य ब्रान्डहरू भन्दा फरक प्रणालीको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
1 TCL र अल्काटेल फोल्डिंग स्मार्टफोनहरूमा शर्त लगाउँछन्
2 टीसीएल किन २०२० सम्म पर्खिरहेको छ?
TCL र अल्काटेल फोल्डिंग स्मार्टफोनहरूमा शर्त लगाउँछन्
यो प्रोटोटाइप जुन कम्पनीले हामीलाई प्रस्तुत गर्दछaसंग आउँछ K.२ इन्च आकारको AMOLED प्यानल २K + रिजोलुसनको साथ (२,०2.048 x x १,1.536 पिक्सेल)। CSOT, एक समूह कम्पनी, प्यानल उत्पादन को प्रभारी थियो। थप रूपमा, यो ध्यान दिनुपर्दछ कि यस प्यानलले उपकरणको अगाडि of ०% ओगटेको छ। के रमाईलो र सम्भवत: ड्र्यागनहिंगको कुञ्जी यो हो कि तपाइँले चाहानु भए पनि यो मोडिन सक्छ। केहि चीज जुन यसलाई प्रणालीबाट भिन्न गर्दछ ग्यालेक्सी तह वा हुआवेई मेट एक्स.
टीसीएलले फोनका लागि फोल्डिंग सिस्टमको रूपमा ड्र्यागनहिंग विकसित गरेको छ। जैसा कि उल्लेख गरिएको छ, यो एक काज हो जसले अनुमति दिन्छ फोन बाहिरी, भित्री, वा आफैमा मा तह तह, मानौं यो एक क्ल्यामशेल स्मार्टफोन हो। एक बहुमुखी प्रतिभा जसले यस प्रणालीमा कुञ्जी हुने वाचा गर्दछ, थप प्रकारका परिस्थितिमा अनुकूलन गर्नका साथै। यो धेरै साना मोड्युलहरू मिलेर बनेको छ, जुन घुमावलाई क्षेत्रमा समस्याहरू हुन नदिन त्रिज्या दिन मिल्छ।
फोनको पछाडि हामी तीन क्यामेरा देख्न सक्छौं, जसको बारेमा हामीसँग अहिले कुनै सूचना छैन। विनिर्देशहरूमा हामी आशा गर्न सक्दछौं त्यहाँ कुनै जानकारी छैन किनकि यो एक प्रोटोटाइप हो। त्यसैले २०१ 2019 भरि हामी TCL / Alcatel ले यसमा काम गर्ने आशा गर्न सक्छौं। जब महीनाहरू जान्छन् हामी उनीहरूको बारेमा अझ बढी जान्नेछौं। अन्य फोल्डिंग मोडेलहरूमा जस्तै, यो मुख्य उद्देश्यको रूपमा मल्टिटास्किंगसँग डिजाइन गरिएको हो। यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई बहु अनुप्रयोगहरू खोल्न र सजिलैसँग तिनीहरूसँग काम गर्न अनुमति दिनेछ।
यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो, फोल्डिphones स्मार्टफोनको लागि, फोन फोल्ड गर्ने र फोन अनफोल्डि operation गर्ने कार्य असंख्य पटक गरिन्छ। यस फोल्डिंग स्मार्टफोनहरूको लागि यो ड्र्यागनहिञ्ज टेक्नोलोजी विकास गर्दा टीसीएलले गणना गरेको छ। अहिलेको लागी, तिनीहरूसँग पहिले नै यस प्रकारका पाँच भिन्न प्रोटोटाइप फोनहरू छन्। हामीलाई थाहा छैन तिनीहरू सबै सुरूवात भैरहेको छ कि छैन। जे होस् पहिलो २०२० मा आउनेछ, कम्पनीले भने जस्तै। हामी देख्न सक्दछौं कि तिनीहरू भिन्न ढाँचामा शर्त लगाउँछन्, फोल्ड योग्य एन्ड्रोइड फोनहरूको यस क्षेत्रमा एक ठूलो विविधता देखाउँदै।
कम्पनीबाट उनीहरूले यी देख्छन् फोल्डिंग स्क्रीनहरू ठूलो अवसरको रूपमा। विशेष गरी जब यो क्रान्तिकारी डिजाइनको कुरा आउँछ जुन हालसालका केही वर्षहरूमा केही स्थिर भएको छ, किनकि एउटा ब्रान्डको मोडेलहरू एन्ड्रोइडमा अन्य ब्रान्डहरूसँग मिल्दोजुल्दो छ। यस प्रकारको उपकरणहरूको साथ
टीसीएल किन २०२० सम्म पर्खिरहेको छ?
यदि तिनीहरूसँग पहिले नै प्रोटोटाइप छ, धेरैले टीसीएल र अल्काटेलको २०२० सम्म पर्खनुको कारणका बारे आश्चर्यचकित हुनेछन्। हुवावे वा सामसु। जस्ता ब्रान्डहरू भन्दा फरक, कम्पनीसँग यस क्षेत्रका नेताहरू मध्ये एकको रूपमा स्थिति निर्धारण गर्ने वा यसमा आफूलाई एक प्रीमियम ब्रान्डको रूपमा स्थिति निर्धारण गर्ने आवश्यकता वा उद्देश्य छैन। तसर्थ, तिनीहरू २०२० सम्म पर्खन रुचाउँदछन् जब सम्म यो पहिलो मोडल सुरु हुँदैन, एलजी के गर्न जाँदै छ केहि समान।
थप रूपमा, कम्पनीले भनेका छन तिनीहरू बजारमा प्रविधि स्थापना नभएसम्म प्रतीक्षा गर्न चाहन्छन्। निस्सन्देह जस्तो केहि समय लिन केहि ले। जब महीनाहरू जान्छन् र मोडेलहरू आइपुग्छन्, यसका लागि तयारी हुने अनुप्रयोगहरू र अपरेटि system प्रणालीको साथसाथै, यो औसत दर्शकहरूको लागि बढी पहुँच योग्य हुनेछ। त्यसैले तिनीहरू यसको रिलीजको लागि पर्खन चाहन्छन्। त्यसो भएमा सबै हार्डवेयर र सफ्टवेयर चुनौतिहरू राम्रो उपयोगकर्ताको अनुभव दिनको लागि समाधान गर्न सकिन्छ।
TCL बाट वर्णन गरिए अनुसार यस उपकरण जुन २०२० मा अल्काटेल मार्फत आउँछ, यसको मूल्य १,००० युरो भन्दा कम हुनेछ। हालसालै ल्याइएको ग्यालक्सी फोल्ड र हुवावे मेट एक्स भन्दा विशेष सस्तो। अन्य ब्रान्डहरू भन्दा यो धेरै कम मूल्य तिनीहरू किन कुर्दै छन् भन्ने एउटा कारण हो। सुरुमा सबै नयाँ प्रविधिहरू धेरै महँगो छन्।
यद्यपि एक पटक उत्पादन प्रक्रियाहरू मानकीकृत हुनेछन्, ती सम्भावित समस्याहरूको थपमा, एन्ड्रोइडमा फोल्डिंग फोनहरूको मूल्य तल झर्न गइरहेको छ। त्यसोभए टीसीएल र अल्काटेलले कम मूल्यको साथ फोल्डेबल स्मार्टफोन उत्पादन गर्न सक्षम हुनेछन्, जुन बजारमा प्रयोगकर्ताहरूको ठूलो अंशका लागि पहुँचयोग्य छ। यस बीच, हामी यी प्रोटोटाइपहरू हेर्न सन्तुष्ट छौं, जबसम्म पहिलो मोडेल २०२० मा अल्काटेलबाट आउँदैन।
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » TCL MWC19 मा अल्काटेलको फोल्डेबल स्मार्टफोन प्रोटोटाइप प्रस्तुत गर्दछ
स्यान्टियागो रामेरेज लोपेज भन्यो
वाह सामग्री तिनीहरू सधैं साझा
स्यान्टियागो रामेरेज लोपेजलाई जवाफ दिनुहोस्
नयाँ टेलीग्राम अपडेटले भिडियोहरूको स्वत: डाउनलोड र प्लेब्याक थपे
स्विच फर्मले सामसु denलाई यसको सबैभन्दा धेरै प्रतिकात्मक वाचहरूका क्षेत्रहरूको प्रतिलिपि गरेकोमा निन्दा गर्दछ